Ciraaq - ALinks
Maqaallada ku saabsan Ciraaq
Sidee Loo Helaa Shaqooyin Ciraaq?
December 18, 2020 Shubham Sharma Ciraaq, shaqo
Ciraaq waxaa hodan ku ah hidaha, abwaannada adduunka caanka ka ah, ranjiyeyaasha, iyo farshaxan-yahannadii ugu fiicnaa Carabta. Haddii aad qorsheyneyso inaad u guurto Ciraaq, marka hore, waa inaad hubisaa sida loo dalbado fiisada Ciraaq. Tani waa tallaabada koowaad; kadib
October 28, 2020 Antika Kumari Hindida, Ciraaq, fiisada
Fiisaha Hindida Ciraaq waa oggolaansho u oggolaanaysa muwaadiniinta Hindida ah ujeedooyin kala duwan inay dalka soo galaan. Si loo galo Ciraaq, muwaadiniinta ka socda waddan kasta waxay u baahan yihiin rukhsad. Si kastaba ha noqotee, dalal yar oo Carab ah ayaa haysta fiiso la'aan,
Sidee Loo Dalbadaa Ciwaanka Visa Ciraaq?
September 22, 2020 Antika Kumari Ciraaq, fiisada
Qodobkaan, waxaad ku ogaan doontaa sida loo dalbado fiisada Ciraaq. Waa maxay shuruudaha lagu dalbado fiisaha ganacsiga, fiisaha dalxiiska? Muddo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa in la helo marinka Ciraaq, iyo sidee
Waxbarashada Ciraaq: Iskuulada Ciraaq
March 1, 2020 Karuna Chandna Ciraaq, dugsiga, waxbarasho
Nidaamka waxbarashada Ciraaq waxaa gacanta ku haysa dowladda qaranka Ciraaq. Tacliintaan dawliga ah waxaa la siiyaa bilaash laga bilaabo Darajooyinka Aasaasiga ilaa Dhakhaatiirta. Machadyada waxbarashada gaarka loo leeyahay ayaa jira oo kharashka iskuuladu ka dhigaan kuwo aan soo jiidan karin inta badan muwaadiniinta. Ugu weyn
Immisa Lacag ah ayay ku kici doontaa inay ku noolaato Ciraaq
February 19, 2020 Shubham Sharma guryaha, Ciraaq
Ciraaq ama si rasmi ah Jamhuuriyadda Ciraaq waa waddan ku yaal qaybta galbeed ee Aasiya. Baqdaad waa magaalada caasimada ah ee Ciraaq, waxay hoy u tahay qaar ka mid ah qowmiyadaha ugu kaladuwanaanta badan. Ciraaq inta badan waxaa ku nool
Nidaamka Gaadiidka ee Ciraaq
February 17, 2020 Antika Kumari soo qaado, Ciraaq
Nidaamka Gaadiidka ee Ciraaq waa kuwo aad u fudud oo siman. Mid ayaa ka heli kara ku dhawaad ​​meel kasta. Ciraaqiyiinta waxay kuxiran yihiin waxa aan ugu magacdarnay nafarat1 oo matalaya tiro yar oo minibus ah oo ku uruuraya garaashyada, garaashyada waaweyn, meesha gawaaridu tagayaan
Cisbitaalada ugu Fiican Ciraaq
February 13, 2020 Shubham Sharma caafimaadka, Ciraaq
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, Ciraaq waxay soo saartay nidaam daryeel caafimaad oo guud oo bilaash ah. Sannadkii 1970, waxay bilaabeen adeegsiga isbitaal ku saleysan iyo moodal-ku-saleysnaan weyn oo ah daryeel daaweyn. Ciraaq, oo ka duwan dalalka kale ee saboolka ah, kuwaas oo diiradda saaray daryeelka caafimaadka badan
Hoteellada ugu Caansan ee Ciraaq
February 12, 2020 Maitri Jha hotels, Ciraaq
Ciraaq waa magaalo ay ku yaalaan goobo qadiim ah oo barakeysan, buuq buuq badan iyo neefta qaar oo buuro qaata. Waxay ka mid tahay ummaddii ugu horreysay ee ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay laga aasaasay. Ciraaq waa wadan aad hodan ugu ah
Waqtiga ugu Fiican ee La Raadiyo oo Booqo Ciraaq
February 11, 2020 Antika Kumari Ciraaq, safarka
WAQTIGII ugu fiicnaa ee la soo bandhigo iyo fiirintii IRAQ waxay ku jirtaa SPRING iyo AUTUMN, oo ka soo baxda kuleylka jirka iyo kan ugu hooseeya ee loo yaqaan 'CHINTER CHILLS'. Dabayaaqadii Meey ilaa horraantii Sebtembar aad ayey u kulushahay uguna qallalan tahay Ciraaq, iyadoo heerkulku aad uga sarreeyo 40 ° C. Ugu
Booqashada Ciraaq? Waa inay tagtaa meelahaas !!
February 8, 2020 Karuna Chandna Ciraaq, safarka
Ciraaq waa dal soo jiidasho leh. Laakiin Ciraaq ayaa lumisay booskeedii saaxadda dalxiiska adduunka. Hadda waa waddan qarsoodi ah safarka. Iyo sidoo kale waa ummad dabiici ah oo ummad taariikhi ah oo ku dhalatay dhalashada hore ee casriga ah